Intanet nke Ihe Ga-enwe Nnukwu Ọrụ na Njem Mgbasa Ọrịa | Teknụzụ Njem
Home » Akụkọ Teknụzụ Njem » Ofntanetị nke Ihe Ga-enwe Nnukwu Ọrụ na Njem Ọrịa Na-akpata Ọrịa
Ofntanetị nke Ihe Ga-enwe Nnukwu Ọrụ na Njem Ọrịa Na-akpata Ọrịa
Ngwaọrụ eji arụ ọrụ na ọdụ ụgbọelu na ọdụ ụgbọ njem ndị ọzọ nwere ike ịhapụ ndị njem ka ha na-eme usoro ngbasa mmekọrịta mmadụ na ibe ha ma debe ụkpụrụ nduzi na ahụike na nchekwa ndị ọzọ, nke na-agbasa mgbasa nke COVID-19 ma mee ka ndị njem nwee nchebe.
Ngwa ejikọtara nwere ike ime ka njem ndị njem na-adị nchebe na obodo ma ọ bụ ebe ọ na-aga, site na ịdọ aka na ntị oge gbasara igwe mmadụ.
Ngwa jikọtara ọnụ nwekwara ike belata ụjọ na mpaghara ndị nwe naanị.
Otu n'ime isi ihe kpatara njem na njem na-nwayọ nwayọ na mgbake ya bụ egwu na nchekwa na-aga n'ihu n'etiti ndị na-azụ ahịa.
Ntanetị nke ihe (IoT) nwere ike inye aka belata nchegbu ndị njem banyere ahụike na ahụike nke onwe gị, ebe ị na-ekwe ka ụlọ ọrụ ndị njem na ndị njem nweta ọtụtụ data maka ọtụtụ uru dị n'ime na nke mpụga. Ndị ọkachamara n’ọrụ ụlọ ọrụ ahụ kwuru na nka na ụzụ a ga-enwe nnukwu ọrụ ọ ga-arụ na njem njem na-efe efe n’ihi ya.
Akụkọ kachasị ọhụrụ, 'IoT na njem & njem nleta', na-ekwu na ngwaọrụ ndị nwere ike weara na ọdụ ụgbọelu na ọdụ ụgbọ njem ndị ọzọ nwere ike ịhapụ ndị njem ka ha na-eme usoro ngbasa mmekọrịta mmadụ na ibe ha ma debe ụkpụrụ nduzi na ahụike na nchekwa ndị ọzọ, nke na-agbasa mgbasa nke Covid-19 ma na-eme ka ndị njem nwee obi iru ala.
Ngwa ejikọtara nwere ike ime ka njem ndị njem na-adị nchebe na obodo ma ọ bụ ebe ọ na-aga, site na ịdọ aka na ntị oge gbasara igwe mmadụ. Enwere ike iziga ịdọ aka na ntị a na ekwentị mkpanaaka site na teknụzụ mgbama, na-adụ ha ọdụ ka ha buru ụzọ ọzọ, nke na-ebelata ihe ize ndụ nke ịbelata nje n'oge ezumike obodo.
Ngwa jikọtara ọnụ nwekwara ike belata ụjọ na mpaghara ndị nwe naanị. Ọmụmaatụ, HiltonTeknụzụ 's' ejikọtara 'na-enye ndị ọbịa ohere iji Hilton Honors app jikwaa ọtụtụ ihe ha ga-eji aka ha mee n'ime ụlọ ọbịa. Site na ịchịkwa ọnọdụ okpomọkụ na ọkụ na TV na mkpuchi windo, teknụzụ IoT na-enye ndị ọbịa ohere ịbelata oge ha ga-emetụ ihu nwere ike imetọ.
COVID-19 emebisịala njem na njem. Otu n'ime isi ihe kpatara ngalaba a jiri nwayọ na mgbake ya bụ ụjọ na-aga n'ihu na nchekwa na nchekwa n'etiti ndị na-azụ ahịa, nke gọọmentị mere ka ọ dị ike. Dabere na ndị ọkachamara n'ụlọ ọrụ, 85% nke ndị na-azụ ahịa ka bụ 'oke', 'ezigbo' ma ọ bụ 'ntakịrị' nchegbu gbasara ahụike ha n'ihi ọrịa ahụ na-efe efe.